छोरा वा छोरी जन्म दिने आमा नै हुन्छ । तर अब केहीको हकमा भने त्यो गलत हुने भएको छ । हालै हजुरआमाले आफ्नो नाती जन्माएकी छन् । हजुरआमाले नाती जन्माएपछि छोरीलाई हस्तान्त्रण गरेकी छन् । बेलायतकी एक महिलाल...
बालबालिकाको जीवनमा आमाको महत्व अति नै हुन्छ । त्यसैले त मानिस आमालाई धेरै सम्मान गर्छन् । तर, यूक्रेनमा आमा प्रेमी भेट्न गएपछि खान नपाएर एक २३ महिने बालकको मृत्यु भएको छ । प्रेमी भेट्न पुगेकी आमाले घ...
सन २०१४ मा बिवाह वन्धनमा बाधिएका अष्ट्रेलियन अरबपति रिचार्ड लूगनर र जर्मन मोडल क्याथीबीच डिभोर्स भएको छ । रिचार्ड आफूभन्दा ५७ वर्ष कान्छी श्रीमती क्याथीसँग डिभोर्सपछि अलग भएका छन् । जर्मन मोडल क्याथी ...
राम्री देखिनका लागि सधैं सेभ गर्छिन यी महिला
तपाई हामीले पुरुषहरुले मात्र दारी काट्ने गरेको देखेका छौ । तर, दुबइमा बस्ने यी महिला भने दिनहु दारी काटेर मात्र मेकअप गर्ने गर्छिन । यसो गर्दा मात्र आफ्नो सुन्दरतामा निखार आउने गरेको बताउछिन यिनी । ३२...
सोसल मिडियामा भाइरल बन्दै महिलाहरुको ‘न्यूड सेल्फी ट्रेण्ड’
सोसल मिडियामा कहिले के कुरा भाईरल बन्छ भन्ने कुराको कुनै अन्दाज नै गर्न सकिन्न । वास्तवमा सोसल मिडिया एकप्रकारले लडहवाजीको थलो हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। सोसल मिडियामा समय समयमा विभिन्न विषयहरु भाइरल ब...
नांगै खेदिए प्रेमी
अहिले रुसमा जाडो बढेको छ । यस्तोमा एक युवतीले प्रेमीलाई नांगै घरबाहिर निकालिदिएकी छिन् । प्रेमिकाले नांगै घरबाहिर निकालिदिएपछि जाडोले तड्पिँदै ती प्रेमी अन्धाधुन्ध कुदेको भिडियो अहिले अनलाइनतिर भाइरल ...
एउटा घरमा चारपाँच जना मानिस बस्दा अनेक समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । एउटै घरमा १५- २० बसेको सुन्दा धेरैले जिब्रो टोक्ने गर्छन । कसरी व्यवस्थापन भएको होला ? सुन्ने वित्तिकै आश्चर्य मान्ने गरिन्छ । एउटै घ...
एक जना वृद्ध महिलाको छोरा छोरीदेखि खनाति खनातिनीसम्म गरी कति सन्तान हुन सक्छन् रु बढीमा ५०, ६०, ७०, ८० । तर, गुल्मी रुरु गाविस–३, च्युरेककी भिमला ज्ञवालीको भने छोरा छोरीदेखि खनाति खनातिनीसम्म गरी एक ...
खानासँग सेक्स साट्न खोज्दा….
खानासँग सेक्स साट्न अनलाइनमा मोलमोलाइ गर्ने एक युवतीलाई अमेरिकामा पक्राउ गरिएको छ । अमेरिकी राज्य ओहियोकी क्रिस्टल हट्लोस्ज नाम गरेकी युवतीलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ‘योङ टाउन ब्ल्याक पे...
यी हुन अमेरिकाको राजदूतको दाबी गर्ने पोर्न स्टार
आफूलाई साउदी अरबबाट अमेरिकाको राजदूत बनाउनुपर्ने मिया खलिफाको अनलाइन याचिकामा हजारौं मानिसहरुले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । अमेरिकामा चेन्ज डट ओआरजीमाथि यो सम्बन्धि अनलाइन याचिका चलाइएको छ । यसमा अहिलेसम...
सन्सारमा यस्तो अनौठो रेष्टुरेण्ट पनि छ
यो सन्सारमा अनौठो खालका रेष्टुरेण्ट छन् । कतै निर्वस्त्र महिलाको जिउमाथि राखिएका खानेकुरा खान पाइन्छ त कतै वेटरजति सबै कान नसुन्ने हुन्छन अनि कतै सबै होचा मानिस वेटरको रुपमा राखिएको हुन्छ । कुनै रेष...
लामो समयदेखि उनलाई पतीमाथि शंका थियो । शंकालाई वास्तविकता थाहा पाउन उनी पतीले थाहा नपाउने गरि पिछा लागिन । यसपछि उनी शहरमा आएर चुपचाप आफ्ना पतिको निगरानी गर्न थालिन् । यसक्रममा उनले पतिलाई गर्लफ्रेण्ड...
विवाह गर्न बेहुला नपाएपछि
सीरिया एउटा इस्लामिक देश हो । यहाँ विवाह गर्न योग्य पूरुषहरुको ठुलो खडेरी परेको छ । धेरै युवाहरु युद्धमा मारिसकेका छन् । भाग्न सक्ने जति विदेश पलायन भएका छन् । देशमा चलेको गृह युद्धका कारण युवाहरु जु...
१७ का बेहुला, ७१ की बेहुली
१७ वर्षका किशोरले ७१ वर्षकी वृद्धासँग बिहे गरेको खबर अपत्यारिलो लाग्न सक्छ ? तर, यो सत्य हो । गेरी नाम गरेका बेलायतका १७ वर्षे किशोरले ७१ वर्षकी अलमेडा हार्डविक नाम गरेकी महिलासँग बिहे गरेका छन् । आफू...
पाकिस्तानको इस्लामावादमा एक महिला वकिलले चिकित्सकले लापारवाही गरेर आफ्नो बिरालो मारेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छिन । सुनदस हुरेन नाम गरेकी महिलाले चिकित्सकलाई जेल सजायसहित आफूलाई २ करोड ५० ला...
घरमा पत्नी हुँदाहुँदै अरुको पत्निसँग लाग्ने पतीलाई चीनमा एक महिलाले अनौठो सजाय दिएकी छिन । सजाय पनि कस्तो भने श्रीमानलाई आफ्नै आफ्नै ब्रा र पेन्टी लगाएर माफी माग्न लगाउने । श्रीमानले अर्की महिलासँग ला...
सुन्दै अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने यो समाचार हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीनको हो । चीन सेक्समा बारेमा अलि बढी नै उदार छ । त्यसैले होला चीनमा बेलाबेलामा सेक्स सम्वन्धि रोचक घटनाहरु सुन्नमा आइरहन्छन् । हालसा...
साँचो प्रेमले कुनै उमेर,जातभात र धर्म भन्दैन भन्ने भनाई रहेको छ । यसै भनाईलाई चरितार्थ गरेका छन एक जोडीले । लन्डनका यी जोडी हुन् गैरी र अलमेडा । उनीहरुमध्ये गैरी अर्थात (केटा)को उमेर मात्र १७ वर्षको...
सुन्दरताले मानिसलाई बिभिन्न कोणबाट आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । यसैले होला चाहे पाकिस्तानी चियावाला हुन वा नेपालकी तरकारीवाली कुसुम श्रेष्ठ सुन्दरताकै कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका हुन् । यस्तै सुन्दर...
इन्डोनेसियाली सरकारले ल्यायो यस्तो अनौठो उपहार योजना !
तपाईले जीवनमा थुप्रै मुसा समाउनु भएको होला तर अवश्य पनि कुनै इनाम पाउनु भएको छैन होला ।तर हालसालै इन्डोनेसियाली सरकारले मुसा पक्रनेलाई इनाम कार्यक्रम घोषणा गरेको छ त्यो पनि नगदमा । इन्डोनेसियाको ...